Nezvedu - Medo Kushongedza Co, Ltd.
MEDO, yakavambwa naVaViroux, inovavarira kupa imwechete-yekumira sevhisi kubatsira kuvaka yako-nyeredzi shanu imba nemitengo inodhura.
Kutanga nehwindo nemusuwo bhizinesi, vatengi vachiwedzera uye vanoisa MEDO kuti ivabatsire nekutenga fenicha.
Zvishoma nezvishoma, MEDO inogadzira fekitori yemidziyo kuburikidza neacacacific yekupa imwechete-yekumira sevhisi.
Seye inotungamira inogadzira yemahwindo windows uye musuo masisitimu pamwe neiyo minimalist fenicha,
MEDO inopa yakakura zvigadzirwa mhando kuti isangane nezvinodiwa zvese kubva kune vanogadzira, vagadziri uye vashandisi vekupedzisira.
Kuenderera mberi kweR & D uye zvigadzirwa zvemhando yepamusoro zvinotigonesa isu kuva wevatambi muindasitiri.
MEDO haisi chete inopa chigadzirwa, asi anovaka mararamiro.
Chimiro chakasarudzika, mhando yakasimbiswa
Pry-kuramba, anti-kudonha, kumwe kuchengetedzeka
Zvinhu zvekutanga, dhizaini yakakosha
Energy kuchengetedza, kuputira inzwi, chengetedzo
Hwindo uye masuo masisitimu anofukidza angangoita ese mahwindo nemhando dzemusuwo mumusika, kusanganisira asi zvisina kuganhurirwa ku:
• Outswing hwindo rekamuri
• Kuchenesa hwindo rekamuri
• Tilt uye Turn windows
• Inotsvedza hwindo
• Hwindo rakafanana
• Kunze gonhi remukati
• Kusona musuwo wekamuri
• Sliding musuwo
Simudza uye Slide Door
Musuwo unotenderera unoshanduka
• Bi kupeta musuwo
• French musuwo
• Denga rekunze uye shading system
• keteni madziro etc.
Zvine mota uye zvinyorwa zvemanheru zviripo.
Stainless simbi flynet uye yakavanzwa flynet inowanikwa.
Nekutsaurira pamusoro pekurapwa, premium gaskets uye yakasimba dhata.
MEDO fenicha renji inovhara mizhinji yemidziyo yemumba inosanganisira pasofa, cheya yekuzorora, cheya yekudyira, tafura yekudyira, tafura yekuverenga, tafura yekona, tafura yekofi, kabati, mubhedha nezvimwewo, izvo zvakagadziriswa uye zvakaomarara.
Yakachena Uye isina Guruva Nzvimbo
Iine extrusion chirimwa, Hardware fekitori, yekugadzira nzvimbo uye fenicha yekugadzira base zvese zviri muFoshan, MEDO inonakidzwa nezvakakura zvakanakira kune vane hunyanzvi vashandi, yakagadzikana zvitengeswa cheni, kukwikwidza mutengo uye nyore kutakura kubatsira vatengi kuwana pamusoro pemusika wavo. Mbishi zvinhu uye zvinoriumba zvakanyatsosarudzwa uye ISO zviyero zvakanyatsoteedzerwa kuteedzera yakagadzikana mhando uye inokurumidza kuendesa, kuitira kuti vatengi vagone kunakidzwa kwakafanana kunyangwe mushure memakore mazhinji.
Yakavakirwa mumisimboti yehunhu, sevhisi uye hunyanzvi, isu tiri kuwedzera yedu yekutengesa network nekukurumidza uye kutsvaga vatinoshanda navo nevaparidzi pasi rese. Usazeza kutibata nesu kana uchifarira! Chikwata chedu chinosvika kwauri mukati ma2 maawa ekushanda.
Chikwata chedu chinonyatsosarudza zvinhu zvine mwero wepamusoro uye zvinogara zvichisimudzira kukwana mune ruzivo kupa vatengi vedu premium uye zvigadzirwa zvinogara kwenguva refu.
Yese-kutenderera sevhisi inowanikwa zvisati zvaitika, panguva uye mushure mekutengesa kupa vatengi vedu hunyanzvi hwekutsigira technical uye ruzivo rwakakura.
Chigadzirwa chedu ndechimwe chezvakakosha mukusimudzira kweyekushomeka kwechivakwa, izvo zvakafemerwa zvikuru nevakagadziri uye vagadziri. Zvigadzirwa zvitsva zvichavhurwa gore rega rega se trendsetter.